Nahoana ny Fifidianana UNWTO no tokony ho lasa fanahiana maika ho an'ny Firenena Mikambana sy ireo filoham-panjakana?
Home » Lahatsoratra farany farany » malaza ankehitriny » Nahoana ny Fifidianana UNWTO no tokony ho lasa fanahiana maika ho an'ny Firenena Mikambana sy ireo filoham-panjakana?
Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Editorial • Vaovaom-panjakana • Vaovao • fanorenana • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Enga anie tsy ny fizahantany no mitondra ny fanonganam-panjakana amin'ny rafitry ny Firenena Mikambana!
Ny fizahantany no ivon'ity sary ity noho ny antony roa.
Coup de grace amin'ny rafitra ONU
Ny areti-mifindra dia nalemy ny rafitry ny Firenena Mikambana, nankasitraka ny fipoiran'ny politika indrindra, raha tsy izany, miompana amin'ny firenena.
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny Varotra, niatrika ny fangatahan'i India sy Afrika Atsimo hanalalahana ny famokarana vaksiny, dia tsy afaka nanao na inona na inona momba izany na dia teo aza ny fanohanan'ny ankamaroan'ny mpikambana ao aminy, noho ny fomba fanaony.
Ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia lasibatry ny fanakianana sy ny fanafihana, izay mety ho avy amin'ny olana ara-politika ao anatin'ireo mpikambana ao aminy no fototry ny olana.
Ny antso ho amin’ny fanaovana vaksiny faobe any amin’ireo firenena mahantra dia tsy azo ekena. Ny tarehimarika milaza fa firenena dimy na folo no nanao vaksiny 75 na 80%-n'ny mponina ao aminy, dia nitoetra ho naharitra volana maromaro na dia notsiahivin'ny sekretera jeneraly azy aza matetika fa tsy eken'ny sekretera jeneraly.
Niova io tarehimarika io ankehitriny, noho ny fivoarana any amin’ny firenena be mponina sasany, saingy mbola mampanahy ihany ny toe-draharaha afrikanina, araka ny nahatsiarovan’ny Talen’ny fikambanana misahana an’i Afrika farany teo.
Tsy nilamina ny fiantsoan’ny sekretera jeneralin’ny Firenena Mikambana.
Etsy ankilany, voarakitra an-tsoratra ny fanambaran'ireo vondrona ao amin'ny firenena manankarena sy/na be indostria indrindra amin'ny fivorian'izy ireo tsindraindray, izay tsy misy afa-tsy manam-panantenana tsy mitsaha-mitombo ihany no afaka manombatombana ny maha-azo itokiana ny olan'ireo firenena somary mandroso.
Raha ny momba ny valan'aretina dia mety ho nankasitraka ny fipoiran'ny karazany vaovao amin'ny virus izany.
Ny vokatra faran'izay voafetra amin'ny COP26 dia famantarana iray hafa amin'ny fotoana tsy mety amin'ny fiaraha-miaina iraisam-pirenena.
Na izany aza, maro ny antony ara-jeopolitika hanamafisana ny fifandraisana iraisam-pirenena. Tafiditra ao anatin'izany ny varotra, ny fifindra-monina, ny fitoniana isam-paritra ary ny toekaren'izao tontolo izao, izay tratran'ny areti-mifindra, na dia eo aza ny tsy fitoviana ara-jeografika sy sehatra.
Taratasy misokatra faharoa nataon'ireo tompon'andraikitra ambony ao amin'ny UNWTO mandrisika ireo firenena mpikambana hanome alalana ny fifidianana sekretera jeneraly vaovao sy mety.
Ny voalohany dia ny fandraisany anjara amin'ny GNP manerantany. Talohan'ny fihanaky ny valan'aretina dia manodidina ny 10% izany, ary ankehitriny dia nihena ho 5% izany, ary misy fiantraikany ankolaka amin'ny fanjifana sy amin'ny sehatra ambaratonga faharoa. Ny fanarenana azy dia ao anatin'ny fandaharan'asa ara-toekarena ho an'ny firenena rehetra, fa ho an'ny firenena sasany dia tena ilaina tokoa izany, satria saika miankina amin'ny tsirairay ny toekaren'izy ireo, miaraka amin'ny fandraisana anjara amin'ny GNP-ny hatramin'ny 30%.
Izany no mahatonga ny fikambanan'izao tontolo izao ho matanjaka sy mora tohina amin'ireo olana isan-karazany aterak'ity indostria ity arakaraka ny toetran'ireo firenena. Mora ny manolotra soso-kevitra amin'ireo firenena toa an'i Rosia na Etazonia, na ireo toerana fizahan-tany lehibe eoropeanina aza, mba hanohanana ny fizahan-tany ao an-toerana, saingy mampihomehy ny mieritreritra fa ny fepetra toy izany dia mety ho an'ny firenena toa an'i Seychelles, Saint Lucia, na Fiji.
Saingy amin'izao fotoana izao, ny fizahan-tany dia mety ho singa manan-danja amin'ny fitoniana ny rafitry ny Firenena Mikambana noho ny toe-javatra iray - ny Fivoriamben'ny UNWTO ho avy, ny World Tourism Organization.
Ao anatin’ny fandaharam-potoanany ny fanendrena ny sekretera jeneraly mandritra ny efa-taona manaraka.
Tao anatin’ny Filankevitra mpanatanteraka niteraka resabe, nilaza ireo Sekretera jeneraly roa teo aloha fa nosoloina mba hanafoanana ny fifaninanana amin’ny fampielezan-kevitra.
Ny tolo-kevitry ny filankevitra mpanatanteraka hanendry an'i Zurab Pololikashvili indray dia tsy maintsy ankatoavin'ny 2/3 amin'ireo firenena mpikambana manatrika ny fihaonambe.
Ity fepetra ity dia avy amin'ny fitsipika, napetraka tamin'ny 1978 tao Buenos Aires, izay mametraka ny fepetra roa amin'ny fifidianana ny Sekretera Jeneraly amin'ny alalan'ny maro an'isa mahafeno fepetra sy latsa-bato miafina.
Ny fitsipika roa dia contextual. Raha anontaniana ny iray dia tsy misy antony hiheverana fa ambony ny iray ka tsy azo anontaniana.
Izany dia manondro ny fiarovana sy ny fanajana azy ireo ho antoky ny fahadiovan'ny hetsika lehibe indrindra ho an'ny fikambanan'ny Firenena Mikambana. Na izany aza, ny propagandy subliminal dia nanolotra tao amin'ny tranokalan'ny fikambanana ho toy ny fankatoavana fotsiny ny fifidianana, ary tamin'ny fiantsoana ny fihaonambe manaraka dia nampahatsiahivana fa fomban-drazana ny tsy mampiasa ny latsa-bato miafina raha tsy misy firenena iray tsy mibaribary ny tenany. mangataka izany.
Ary koa, ny tononkalo fandrahonana tsy misy fandrahonana izay ilazana ny toe-javatra misy ny tsy fahampian'ny fanaraha-maso ataon'ny fikambanana raha misy ny tsy fankatoavana dia mety hiteraka saro-takarina ho an'ny mpamaky tsy mazoto.
Moa ve tsy ireo izay te hiala amin’ny fitsipika efa misy no tokony handray ny andraikiny sy hametraka ny tavany amin’ny fangatahana fiderana?
Mitaky Filohan'ny Kaonferansa misy izany, noho izany dia mora kokoa ho an'ny Sekretariat ny mampahatsiahy ny fomban-drazana manadino fa misy ihany koa ny lafiny manjavozavo amin'ny fisintonana ny filatsahan-kofidiana, izay ho an'ilay manoratra, dia niantso ny tompon'andraikitra UNESCO teo aloha mba hahatsiaro ilay manjavozavo ihany koa. fanesorana ny hany kandidà Amerikana Latina tamin'ny fifidianana UNESCO 2017.
Ady amin'ny Komitin'ny Mpisolovava WTN
Ny filatsahan-kofidiana naroson’ny Birao Mpanatanteraka no nibahana androany, nokarakarain’ny komity mpiaro ny fizahantany maneran-tany (WTN), izay natrehiko.
Adihevitra nifandanja tokoa izany, ka nanjaka ny filana ny fifidianana ny sekretera jeneralin’ny UNWTO mba hisian’ny mangarahara sy ny tsy fivadihana amin’ny foto-kevitra mamatotra ny mpiasam-panjakana rehetra ao amin’ny Firenena Mikambana.
Izany dia tokony hitaky fanazavana ny fanambarana farany mampanahy (andininy 48-50) ao amin'ny tatitra isan-taonan'ny tompon'andraikitra ara-moraly, annex 1 amin'ny tatitra momba ny harena ankibon'ny tany, ary ny fomba nanaovana ny fampielezan-kevitra ara-dalàna ho an'ny kandidà natolotra, izay mety ho fiheverana. voasarika amin'ny mety ho fitongilanana amin'ny fandaharan'ny fitsidihany ofisialy, indrindra mandritra ny taona 2019, olana iray izay mety ho saro-pady ireo firenena mpikambana izay hadinon'ny UNWTO.
Iray amin'ireo olana mety hisy fiantraikany amin'ny voka-pifidianana ny fanapahan-kevitra (ao anatin'ny fahefany ve izany?) fa taorian'ny fanambaran'i Maraoka fa tsy afaka nampiantrano ny fihaonambe noho ny areti-mifindra (farafaharatsiny ao Marrakech, ilaina ny manazava) , toy izany koa no hatao any Madrid, tsy miraharaha ny tolo-kevitr'i Kenya, izay amin'ny fomba fijery ara-pandaminana dia tsy miteraka olana ary avy amin'ny valan'aretina dia tsara kokoa noho ny Madrid.
Misy ireo mihevitra fa mankasitraka ny kandida atolotra izany, saingy tsy ho tanteraka izany raha toa ka misy fepetra roa, ny iray amin’ny fahaiza-manaon’ny Fihaonamben’ny Fiangonana: ny fanekena fa ny fivoriana tsy miankina izay nifidianana ny Sekretera jeneraly dia azo atao hybrid, mifanatrika - virtoaly, miantoka ny tsiambaratelon'ny latsa-bato, ary ny hafa amin'ny fahaiza-manaon'ireo firenena mpikambana.
Tsy vitan'ny hoe mandrava ny UNWTO ihany ny fifidianana mampiady hevitra fa afaka mitondra ny fanonganam-panjakana ho an'ny rafitry ny Firenena Mikambana ihany koa.
Tsy raharahan’ny minisitry ny Fizahantany izany ary tsy ho an’ny masoivohon’ireo firenena solontena any Madrid izany, fa ho an’ireo mitana ny fahefana mpanatanteraka.